जानीराखौं, जाडो याममा दिनहुँ नुहाउँदा के हुन्छ ? -
जानीराखौं, जाडो याममा दिनहुँ नुहाउँदा के हुन्छ ?
धेरैलाई थाहा छ, शारीरिक स्वास्थ्यका लागि दिनहुँ नुहाउनु फाइदाजनक हो । तर थाहा नभएको कुरा, दिनहुँ नुहाउँदा छालामा नराम्रो असर पनि पर्न सक्छ । खासगरी जाडो याममा ।
अक्सर जाडो याममा नुहाउनका लागि तातो पानी प्रयोग गरिन्छ । यसले छालाको सौन्दर्यमा असर पुर्‍याउँछ । साथै छालाको प्राकृतिक तेललाई पनि नोक्सान गर्छ । यदि दिनहुँ नुहाउने गरेको छ भने, ड्राइ सावुन एवं स्याम्पुको प्रयोग गर्नैपर्छ ।
हाम्रो छालाले एक राम्रो व्याक्टेरिया पैदा गर्छ, जसले रसायनिक उत्पादनले निकाल्ने टक्सिनवाट छालालाई वचाउँछ । यदि दिनहु नुहाउने हो भने उक्त व्याक्टेरिया नष्ट हुन्छ । छाला विशेषज्ञ भन्छन्, जाडोमा दुई/तीन दिनको फरकमा नुहाउँदा पुग्छ ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार हाम्रो छाला सफा गर्नका लागि शरीरमा यस्तो प्रभावकारी तन्त्र हुन्छ, त्यसले स्वतः छाला सफा गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले निस्त्रिmय वस्नेहरुले दिनहुँ नुहाउन आवश्यक छैन । यदि जिम गएर वा कुनै शारीरिक श्रम गरेर शरीरमा पसिना वगाउँने हो भने चाहि नुहउनै पर्छ ।
जाडोमा तातो पानीले नुहाउदा नङ टुक्रिने, चोइटिने हुन्छ । यसले पानी सोस्छ, फलस्वरुप प्राकृतिक तेल र चमक नष्ट हुन्छ ।
नोकियाले आफ्नो पहिचानको रुपमा चिनिएको मोवाइल फोन ३३१० फेरि बजारमा ल्याएको छ । यो फोन झण्डै १७ वर्षअघि पहिलो पटक बजारमा आएको थियो र विश्वभरमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने मोबाइल फोन बनेको थियो । ... विस्तृतमा
नेपालगन्ज । चौथो संस्करणको यहाँ सञ्चालित प्रधानमन्त्री महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि भारतको रेल्वे टोलीको पक्षमा गएको छ । प्रतिय... विस्तृतमा
काठमाडौँ, आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तरगत केन्यासँगको खेलअघि अभ्यासको लागि भारतमा रहेको नेपाली टोलीले पहिलो खेलमा हार बेहोरेको छ ।... विस्तृतमा
काठमाडौं । नेपालको मनाङ मस्र्याग्दी क्लवले बंगलादेशका जारी शेख कमल अन्तर्राष्ट्रिय क्लव कप फुटबल प्रतियोगितामा आज सेमिफाइनल खेल खेल्दैछ । &nb... विस्तृतमा
म्याग्दी । म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा आगामी चैतमा राष्ट्रियस्तरको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुने भएको छ । म्याग्दीका युवाको नेतृत्वमा काठमाड... विस्तृतमा
चित्तगोङ- मोहमडन स्पोर्टिङ क्लबले शुक्रबार सहिन अस्मायीलाई २–० ले पराजित गरेपछि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब शेख कमल अन्तर्राष्ट्रिय क्लब कपको सेमिफाइन... विस्तृतमा
विराटनगर – नेपालमा एक सयभन्दा धेरै जोडी समलिङ्गी औपचारिक रुपमा विवाह गरेर बस्ने चाहना गरेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।... विस्तृतमा
काठमाडौँ । “म साङ्ग हुन्जेल श्रीमान्सँग राम्रो सम्बन्ध थियो, घरपरिवारसँग पनि राम्रै थियो । जब म शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भए त्यसपछि श्रीमान्ले... विस्तृतमा
सकुन्जेल बालुवा बोक्छु, नसके भगवानले बाटो लाउलान् नि
बिहानको घाम झुल्केसँगै छ दशक पार गरेका साइला गुरुङ सेती नदीको किनारमा पुग्छन् । बालुवा चाल्ने र बोकेर बाटोमा ल्याउने उनको दैनिकी जस्तो नै छ । ... विस्तृतमा
वैज्ञानिकहरुले गरेको शोधअनुसार तपाईंको हार्मोन, रुचि र तपाईंका अभिभावकजस्ता कुराले तपाईंको प्रेमी या प्रेमिका छान्ने वा छानिने प्रमुख कारण बन्न सक्छन्... विस्तृतमा